ABOn kaayyoo dha! Kaayyoon PP-Oromiyaa diigee Ethiopia ijaaruu dha! – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooABOn kaayyoo dha! Kaayyoon PP-Oromiyaa diigee Ethiopia ijaaruu dha!
ABOn kaayyoo dha! Kaayyoon PP-Oromiyaa diigee Ethiopia ijaaruu dha!
ABOn kaayyoo dha! ABO fi PPn Kaayyoo iratti wal dhaban!Kaayyoon PP-Oromo fi Oromiyaa diigee Ethiopia ijaaruu dha! Kaayyoon ABO~sirna Habashaa diigee, Oromoo fi Oromiyaa ijaaruu dha.
Addi Bilisummaa Oromoo (ABO) jaarmayaa siyaasaa kiyyoo kolonii Habashoota jalaa bilisa bahuuf qabsoo bilisummaa ummatni Oromoo gaggeessu hogganuuf sabbontootaan bara 1973 keessa ijaaramee dha. ABO ijaaramuun hawwi ummata Oromoo jaarraa tokkoo kan qabsoo cimaa fi waaltaawe qabaachuu dhugoomse.
Akeeki hundee QBO mirga hiree murteeffannaa ummata Oromoo kan uumaman qabu mirkaneessuu dha. Mirgi hiree murteeffanna kun mirkanawuun cunqursaa fi saaminsa jaarraa tokkootti xumura godhee yoo danda’ame waltahiinsa siyaasaa walqixxummaa fi fedhii irratti hundaawe ummatoota kaan wajjin utubuu dha.
Mirga hiree isaa murteeffachuuf qabsoon ummatni Oromoo gaggeessu qabsoo haqaa fi mirgaa ti. Mirga bu’uraa isaanii deebifachuuf qabsoon ummatooti godhan chaartara Mootummoota Waltahanii keessatti kan barraawee dha. ABO kan qabsoo godhaa jiru cunqursaa jaarraa tokko OLIIF TURE dhabamsiisee ummatni Oromoo akka mirga kana gonfatu godhuu dha. Kaayyoo kana bakkaan gahuuf tattaafachuun ABO akeeka dimokraasii irratti kan bu’ura godhatee dha. Kunis ummatni Oromoo walabummaa gosa fedheen jiraachuu ykn ummatoota kaan wajjin tokkummaa siyaasaa ijaarrachuu keessaa murteeffachuuf mirga uumaman qabuu dha.
Bara 1991 aangoon biyya Itophiyaa bulchuu gita bittuu Amaaraa irraa Tigirooti fudhachuun mirgi ummata Oromoo fi ummatoota kaan akka kabajamu hin goone. Jijjiirran tahe kan kabeebsaa, qabsoo bilisummaa qabbaneessuuf kan godhamee dha. Qabsoo bilisummaaf ummatni Oromoo gaggeessu sirna cunqursaa mootummaa irratti kan xiyyeeffate malee ummata kam iyyuu kan hin ilaalle tahuu ABO irra deebi’ee mirkaneessa. Fedhii irratti hundaawanii, bu’ura ummatooti bilisa tahan tokkummaa siyaasaa ummachuuf godhan ijaaruuf ABO fi ummatni Oromoo murteeffatanii jiru.
Wallo (Amhara region) keessatti kan Oromoo dha dubbate hundu 'ABO' dha
Wallo (Amhara region) keessatti kan Oromoo dha dubbate hundu 'ABO' dha Mee kana ilaalaa, kan…
Ethiopia: History of Beginning, Thriving and Ending of Abyssinia Colonial Occupation
ODUU Hatattama Jeneraal marroon waraana wada galchun lola egalanin Waran Abiy fixan